QARSOONAANTA BEERISTA BARIISKA BARIGA EE BANNAANKA U FURAN - SOOSAARKA DALAGGA
Oriental orange ama caleen yar - koritaanka dilka ah ee caanaha ah ee cawska, buuraha buuraha iyo meelaha kaynta. Noocyo firfircoon ayaa la sameeyay tan iyo dhamaadkii qarnigii 19aad si ay u koraan ubaxa sida warshad ornamental ah.
Sharaxaadda Bariga Poppy
Oriental horni ayaa si toos ah u dhajisey qadar yar oo caleemo lateral ah. Dhicid waxay ku xiran tahay kala duwanaanshaha koritaanka min 40 cm illaa 90 cm, inta badan way cararaan, oo leh whitish whitish. Ka tago on dheer ee petioles dhaadheer, lanceolate, lakulmay galay qaybo badan oo fiiqan, inta badan caleenta. Inta badan noocyada baradhada bariiska waxaa lagu qeexaa dhirta dheer ee dheeraaya cirbadaha daba qoyan ee la jaanqaadaya oo leh jeexan adag. Burooyinkuna waxay ku jiraan qaabka ukunta ama dherer ballaaran oo ku saabsan saddex centimitir dherer.
Dhuxulo badan oo la isku qurxiyo ayaa midab leh oo leh midabo casaan ah, mararka qaarkoodna saldhig u ah calaamad madow. Isticmaalidda muuqaalku waxay ku dhowdahay madow oo leh boogaha blueberry ee dheeraadka ah. Geedka ubaxyada horaantii June. Ka dib markii ubaxyo foomamka sanduuqa.
Kuwa ugu caansan ee ugu caansan ee noocyada sii kordhaya ee poppies Eastern:
Perrys White - oo leh ubax cad;
Salmon Glow - ubaxa cowska ah ee hooska liinta;
Beauty of Livermere - tufaax ayaa leh meel madow oo ku taal asalka casaanka ah ee dhalaalaya;
Cedric Morris - oo leh caleemo casaan leh oo casaan leh oo leh meel gudcur ah oo saldhig ah;
Farshaxanka Jannada - ubaxa cawska, dhirta, hooska salmon;
Marcus Perry - liin-casaan oo leh lafo madow;
Sultana - midabka ugu weyn ee tufaaxa waa casaan, saldhiguna waa mid mugdi ah;
Pizzicata - ubaxyo waaweyn waxay ku yimaadaan siyaalo kala duwan - laga bilaabo fawn ilaa tones-lilac tones;
Madow iyo Caddaan - Tartuuqyo cadcad leh oo leh saldhig madow;
Muuqaalka - muuqaalka ugu weyn ee tufaaxu waa caddaan, oo ku dhegay geeska qaybta cas ee ballaaran.
Halka ay ka fiican tahay in la beero bariiska xayawaanka
Poppy xaaladaha dabiiciga ah wuxuu ku koraa meelo cadceedu furan yihiin, markaa marka la beero waxa suuragal ah in ay arrintan ku xisaabtanto. Hooska, dhirta si dhakhso ah uma kicin oo lumiso rafcaanka qaarkood. Bariga Bariga ee beerashada guuleysta, waa in la hoy u yahay hoyga dabaysha, dabeecadda geedka, inkasta oo qaro badan, laakiin aan istaagi karin oo jebin karo. Waxaad ku noolaan kartaa ilaalinta xoornooyinka cufan ama derbiyada guriga, oo la doorbidayo koonfurta.
Marka aad dooranayso goob lagu beerayo, tixgelin meesha ay ku yaalaan dhulka dhulka, nidaamka asalka ah ee poppy si wanaagsan ayaa loo horumariyaa, in ka badan oo qoyaan ah wax kasta. Marka lagu daro biyaha dhulka, fiiro gaar ah u yeelo haddii meesha la doorto ee haraaga ah ay daadadku ku daato biyo kulul. Waxaa sidoo kale lagu hagaa xaqiiqda ah in dhirta ay ku noolaan karto hal meel toban sano ama ka badan.
Ma taqaanaa? Giriiggii hore, boorashadu waxay si qurux ahaan u qurxiyaan madaxda Morpheus iyo Hypnos, ilaahyada hurdo. Waxaa la rumeysan yahay in Morpheus uu qof ku ridi karo riyo adoo taabanaya madaxiisa oo leh madaxa ubaxa.
Sida loo diyaariyo qorshe loogu talagalay beerto barbar socda
Poppy wuxuu jecel yahay bacriminta, dabacsan, biyaha-iyo carrada la gooyo, on carrada acidic, ubaxa dhirta waa yar yahay. Ka hor intaan la beero poppies, carrada si taxadar leh loo diyaariyey: goobta waa in la qodo qoto dheer, tan iyo dhammaan haramaha u baahan tahay in la saaro, iyo qaar badan oo iyaga ka mid ah xididdada dheer. Humus waxaa lagu soo bandhigay ciidda ilaa 10 kg mitir labajibbaaranaha iyo macdanta macdanta ilaa 50 g.
Isku-dubarida ubaxyada lo'da ee leh dhir kale
Poppies, inkastoo ubax gaaban, waa quruxda quruxda leh ee beerta. Markii ay dhirta Oriental-ga ubaxu bararayaan, waxay u egtahay in dab la qabadsiiyay duufaan dabiici ah. Qurxinta midabyada waaweyn ee quruxda badan waxay qurxin doonaan cawska, kabaha, beeraha dhagaxa iyo isku dhafka. Oriental Oriental waa wax fiican in lagu daro cawska leh yarrow ee noocyo kala duwan iyo oregano. Poppies waa qurux badan oo lagu beeray oo kaliya iyo dhagaxyo, tusaale ahaan, asters, dhirbeedyo iyo Veronica. Ubaxyo caleenta cagaaran waxay u adeegi doonaan sida quruxda quruxda leh ee ubaxa leh delphinium, gabbaldayaha iyo badarka firfircoon. Saaxiibo wanaagsan ayaa noqon doona Chrysanthemums Shiinees, daylilies, kalluunka, geraniums, silverweed, xajmiga. Deriska wanaagsani waxay noqon doonaan kosmeya, deerad iyo tubaako.
Xiiso leh Masar hore, poppies waxaa lagu koray on beerto sida warshad daawo ah. Later, Masriyiintu waxay tixgeliyeen ubaxa calaamad u ah bacriminta waxayna qurxisay bucawareedyada macbudka godad Hera.
Daryeelka miraha poppy berrin bannaan
Bloom Poppy dhowr maalmood, ka dib markii taas oo geedka ka kacday, lumiyo muuqaal qurxoon. Haddii aadan u baahnayn abuurka, qaybta kor ku xusan ee geedka waxay u baahan tahay in la gooyo. Ilaa bilawga xilliga dayrta, barafku waa nasasho, ka dibna wuxuu ka dhistaa dalool caleenta ah oo ay la socoto. Guryaha gaarka ah ee xilliga qaboobaha Maca looma baahna, waxay u adkaysaa qabowga.
Oriental haraaga iyo beeritaanka, iyo daryeelka ee berrin furan - warshad aan qabin. Nidaamka asaasiga ahi waa ul dheer oo awood u leh inuu qoyaan ka helo lakabyada qoto dheer ee ciidda. Faa'iidada Tani waxay u oggolaaneysaa in dhirta aysan la kulmin la'aanta qoyaanka abaarta. Sidaa darteed, waraabiyo dhirta u baahan tahay joogto ah, laakiin aan ahayn kuwa badan oo aan badnayn. Iyadoo roobab caadi ah, geedka lama waraabin karo.
Dharka ugu sarreeya iyo mulching
Bariga Bariga ee sariirta ubaxa jecel yahay nadaafad: si joogto ah caws u jaraan haramaha. Iyada oo waraabinta iyo dhar xidhashada hubaal ah in la isku daro dabacsan, nidaamka xididka u baahan yahay hawada. Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, poppy waxaa lagu quudin karaa leh macdanta. Ka hor inta beerto, carrada waxaa la bacrimiyey leh arrinta organic, ka dibna baradho waxaa la quudin leh fuso organic dareeraha ka yar baadiyaha ah (faleebo ah Doodwanaag). Si aad u ilaaliso qoyaanka, ciidda agagaarka jirridda ee poppy waxaa lagu daboolay mulch (peat).
Noocyo badan oo haraaga ah ayaa aad u sarreeya, ubaxuna waa weyn yahay. Miisaanka hoos mara miisaanka inflorescence iyo duufaanka dabayshu way jabi karaan, sidaa daraadeed moobiilka ayaa la xirxiray marxaladda dhismaha buduunka. Sidaa awgeed, lowska ama laan qallalan ayaa ku haboon.
Waa muhiim! Ha isticmaalin nacnacyada nacnacan khafiifka ah ee qashinka qashinka ah si aad uga hortagto waxyeellada asaasiga ah.
Taranta bariga bari
Dhirta Oriental ah ayaa si cad u muuqata mid kasta oo ubax ah, soosaarayaal badan oo bilowga ah ayaa xiisaynaya sida uu dhirta dib ugu soo celiyo. Si loo ilaaliyo astaamaha varietal of vegetpy soo saare vegetatively - by qaybinta baadiyaha. Marka ubaxyada lo'da, baadiyaha waa la qodayaa, loo qaybiyaa qaybo iyo dib loo geliyo godadka loo diyaariyey. Tan iyo dhirta si deg deg ah oo xoog leh u koraan, samee masaafada u dhaxaysa godadka aan ka yarayn 60 cm.
Marka abuurista abuurka sifooyinka hooyada aan la ilaalin. Beeridda abuurka ayaa lagu fuliyaa dhulka banaan, boobka ma dhaqaaqi karo beerka. Goobta waxaa loo diyaariyey: waxay qodayaan, nadiifinayaan, iyo bacriminta. Xayawaanku aad bay u qoyan yihiin, beereedana waxaa loo qaaday si qoto dheer ah laba centimitir, miraha ka baxsan oo soo baxaan guga. Sida beerto kasta oo dhalinyaro ah, geedo way yar yihiin. Dalagyada bariiska ee Oriental sannadka labaad.
Digniin! Wadamo badan, beerashada lo'da ee ka baxsan sharciga, dhirta waxaa loo tixgeliyaa walxo cayriin ah oo ka mid ah kuwa opiate. Joogitaanka beerta ee ka badan toban duurka dhirta waxaa laga yaabaa inay keenaan masuuliyad dambi.
Cudurrada suurtagalka ah iyo cayayaanka ee Bariiska Bariga
Barax bariga badiyaa wuxuu badanaaba wuxuu ku dhacaa xagta uumiga budada ah iyo xagta oo bararsan. Labada cudurba waa fungal dabeecadda, calaamadaha waa lakab cad iyo dhibco ku yaal qaybaha anteenada. Cuduradani waxay keenaan dhimista iyo geerida poppy. Daaweyn: xal of oxychloride copper (40 g halkii 10 litir oo biyo ah), faleebo toon. Xalaalahaan waxaa loo baahan yahay in lagu buufiyo kiisaska kaneecada budada ah. Xajmiga Downy wuxuu leeyahay muuqaal isku mid ah, markaa haddii aadan hubin nooca cudurka kuugu hor taal, ku buufin leh sulfate copper ama Bordeaux dareeraha.
Poppy wuxuu kufikaraa cayayaanka badan: aphid, thrips, xannibmay, dhegaha, dhagaxyada iyo cayayaanka kale ee ku dhasha dhirta ubax badan. Waxaad la dagaalami kartaa cayayaanka kiimikooyinka, sida Aktara, Actellic, Decis Profi.
Poppies - ubaxyo qurux badan, sida iftiinka qoraxda. Bloomkoodu waxay si ku filan u qurxinayaan gees kasta beerta, xitaa waqti gaaban.